Kusungulwa Umbukiso Wezokulima OweHarare Agricultural Show
Umbukiso wezokulima walonyaka oweHarare Agricultural Show usungule NgoLwesibili, ngenkuthazo yokuthi abalimi labakumsebenzi wezemigodi kumele bafunde ukusebenza ndawonye kungabi lokufuthelana phakathi kwenhlangothi zombili ukuze zithuthukise imisebenzi yazo kanye lomnotho welizwe.
Umhlangano wabalimi labakumsebenzi wemigodi, embukisweni owHarare Agricultural Show
Lokhu kuphume emhlanganweni wenhlangothi zombili owenzelwe eHarare embukisweni wezokulima walonyaka, oweAgricultural Show, wokuhlaziya ukuthi bangasebenza njani abakumsebenzi wokwemba labalimi kungela kufuthelana.
Ingcwethi zentuthuko yenotho zithi imisebenzi yonke yomibili iqakathekile ekuthuthukiseni umnotho welizwe ngakhoke kumele abamacele wonke basebenze belandela imithetho elawula umsebenzi wabo.
Abenhlaganiso ebona ngomsebenzi wezemigodi eyeChamber of Mines of Zimbabwe, bathi leli lizwe lilemithetho ecacileyo ephathelane lezokulima lokwemba kodwa ngenxa yokuba leyo mithetho ayilandelwa kucina kudala ukufuthelana phakathi kwamacele womabili.
Abaqoqa umbukiso wezokulima, abeZimbabwe Agricultural Society, bathi owalonyaka uqale kuhle njalo uthembisa ukuba uzaqhubekela phambili kakuhle iviki ize iyephela.
Kulabalimi abangaba likhulu-100, abavele emagumbini amane elizwe kanye lamankampani alikhulu lamatshumi amahlanu lasikhombisa-157, ababukisayo, kushowa yaonyaka ezavulwa okusemthethweni ngolwesine.
Ishowa yaklonyaka iqhutshwa kulandelwa iziqondiso zokuvimba ukuthelelanwa kwegcikwane ele Covid-19, njalo kuvunyelwa ukungena labo abahlatshwe amajekiseni wonke wokuzivikela kuleli gcikwane kumbe abalencwadi eziveza ukuthi bahloliwe batholakala bengela gcikwane leli.
Abe Harare Agicultural Society bathi labo abangasoze bafinyelele ukungena embukisweni walonyaka balakho ukuwubukela enkundleni zebulenjini ezinjengaboZoom lezinye.
Indikimba yombukiso walonyaka ovame ukwenziwa ngoNcwabakazi minyaka yonke, kowa wadluliselwa phambili ngenxa yomsebenzi wokumelana leCovid 19, ikhuthaza ukusebenzelana phansi kwesihloko esithi “Synergies for Growth - Cooperate, Collaborate, Compliment" to rally support for the cause of agriculture and attendant value chains for increased "Production, Productivity and Profitability" with a sub-theme, "Celebrating Unprecedented Growth."